Etu ị ga - esi debe njem ndị ahịa gị | Martech Zone
Nnukwu ọganihu na nyocha ahịa na akwụkwọ bụ ntoputa nke ahịa njem map iji nyere aka ederede, tụọ, ma melite arụmọrụ ahịa gị - ọkachasị n'ịntanetị.
Kedu ihe bụ Njem njem Ndị Ahịa?
Maapụ njem ndị ahịa bụ otu ị si eji anya nke uche hụ ahụmịhe ndị ahịa gị na akara gị. Maapụ njem ndị ahịa na-edetu akara aka ndị ahịa gị n'ịntanetị na offline na akwụkwọ otu ị ga-esi tụọ mmetụta aka ọ bụla. Nke a na - enyere ndị na - ere ahịa aka ịghọta etu ndị ahịa si emekọrịta gị ka ị nwee ike ịkwalite njem ndị ahịa, wepu oghere na ụzọ mgbochi, iji mee ka afọ ojuju ndị ahịa, itinye aka, mgbanwe na ohere dị elu
N'adịghị ka ndị na-ahụ maka ihe ndị ahịa na-eme nke ọma, njem ndị ahịa nwere ike igosi ọtụtụ ụzọ ebe ndị ahịa na-eme mkpebi ma na-emeghachi omume na mmekọrịta ahụ. Maapụ njem ndị ahịa nwekwara ike inyere ndị otu na-ere ahịa gị aka ilekwasị anya na mgbasa ozi gị na mmepe ọdịnaya gị maka ndị ahịa gị. Ọ bụ ezie na ndị ahịa gị nwere ike ịnwe mgbanwe na-enweghị njedebe, enwere ụzọ dị iche iche ị ga-ahụ na ndị ahịa na-agbada (ma ọ bụ na ị nwere olile anya na ha ga-agbada).
85% nke ndị ahịa ọkwa ọkwa kwenyere na ọ dị ezigbo mkpa ịmepụta njem ndị ahịa jikọtara ọnụ, mana naanị 40% na-eji okwu njem ndị ahịa eme ihe. Naanị 29% nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-atụle onwe ha dị irè na ịmepụta njem ndị ahịa.
Chịkọta data nyocha dịnụ site na ebe nrụọrụ weebụ gị nchịkọta, ikpo okwu ahia, CRM, data ahia, na uzo ozo.
Chịkọta data anecdotal site na nlekota oru mgbasa ozi na nzaghachi ndị ahịa iji kpuchie mmetụta na mkpa maka data nyocha gị.
Gwakọta ihe data n'ime nkebi n'ime usoro iheomume (spain) nke na-etinye mmekọrịta dị ka ajụjụ, nyocha, na mkpebi. Gụnye mgbali ahia gi na isi okwu obula.
Kọwa data ma nyochaa usoro ọ bụla ma ọ bụ aka iji mee njem ahụ dị mfe, ngwa ngwa, ma ọ bụ karịa obi ụtọ.
Salesforce meputara ihe omuma a mara nma, Ndị Ahịa Njem Ahịa: Otu esi eduzi ndị ahịa gị, iji kọwaa usoro nke ịdekọ njem ndị ahịa gị, ịkọwa ọkwa ọ bụla, yana itinye usoro kwesịrị ekwesị na nke ọ bụla.
Ahụmahụ Ndị Ahịa Aka na Salesforce
Tags: nyochaa data ndị ahịaihe data ndị ahịanjem ndị ahịaahịa njem mapahịa ndị ahịaahịa touchpointseduzinduziotúna-egosipụta data ndị ahịandị ahịaihe
Ihe karịrị ndị edemede 100 kesara Ihe Ọmụma ha na Akwụkwọ Azụmaahịa Ka Mma
InMoment Study na-ekpughe Igodo isii a na-atụghị anya ya na Nhazi